इजिप्टका अन्तरिम राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान - BBC News नेपाली
इजिप्टका अन्तरिम राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान
Image caption निवर्तमान राष्ट्रपति मोर्सीलाई त्यहाँको सेनाले अपदस्थ गरेर नजरबन्दमा राखेको छ
अन्तरिम राष्ट्पति एडली मन्सुरले देशका सबै पक्षलाई नयां सरकारमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्।
शपथ ग्रहणपछि बोल्दै मन्सुरले देशवासीहरुसंग एउटा स्वच्छ र कम धांधलीपूर्ण प्रजातन्त्रको वाचा गरे।
इजिप्टको अभियोक्ताको कार्यालयले मुस्लिम ब्रदरहुड संगठनका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरेका छन्।
बुधबार सत्ताच्युत गरिएका राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई नजरबन्दमा राखिएको छ।
सेनाले राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सीलाई सत्ताच्युत गरेर नजरबन्दमा राखेको केही घन्टाभित्रै संवैधानिक अदालतका प्रधान न्यायाधीश एडली मन्सुरलाई अन्तरिम राष्ट्रपतिको शपथ दिलाईएको थियो।
यो समाचार सुन्नासाथ म भुईंमा निहुरिएं र प्रार्थना गर्नथालें। गएको दुईवर्षमा हामी धेरै थाकेका छौं। त्यसैले म अहिले निकै खुसी छु। हामी मोर्सी र यो सबै प्रणालीबाट वाक्क भैसकेका छौं
महादी हमद, मोर्सी विरोधी एकजना प्रदर्शनकारी
मन्सुरले ताजा चुनाव नै अगाडिको एकमात्र बाटो भएको बताए तर उनले कुनै मिति भने खुलाएनन्।
उनले देशमा सुरक्षा र स्थिरताको प्रत्याभूति दिने शक्ति भन्दै सेनाको प्रशंसा पनि गरेका थिए।
सेनाले राष्ट्रपति मोर्सीले जनताको माग पुरा गर्न नसकेकाले उनलाई पदबाट हटाउनु परेको जनाएको छ।
तर मोर्सीले एक वक्तव्य प्रकाशित गरी त्यस्तो कदमलाई सैनिक सत्ता विद्रोह भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्।
राष्ट्रपति मोर्सी विरुद्ध कैयौं दिनसम्मको विशाल जनप्रदर्शनपछि इजिप्टको सेनाले त्यस्तो कदम चालेको थियो।
प्रदर्शनकारीहरुले मोर्सी र उनको मुस्लिम ब्रदरहुड दलमाथि देशमा इस्लामवादी एजेण्डा लादन चाहेको र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन कुनै काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए।
बुधबार अबेर इजिप्टको सेनाका प्रमुख जनरल अबदुल फताह अल सीसीले मोर्सीलाई सत्ताच्युत गरिएको घोषणा गरेपछि राजधानी कायरोस्थित तहरिर स्क्वायरमा भेला भएको दशौं हजार प्रदर्शनकारीहरुले खुसियाली मनाएका थिए।
मोर्सी विरोधी एकजना प्रदर्शनकारी महादी हमदले भने, "यो समाचार सुन्नासाथ म भुईंमा निहुरिएं र प्रार्थना गर्नथालें। गएको दुईवर्षमा हामी धेरै थाकेका छौं। त्यसैले म अहिले निकै खुसी छु। हामी मोर्सी र यो सबै प्रणालीबाट वाक्क भैसकेका छौं।"
सरकारी स्वामित्वको अल अहराम समाचारपत्रले मुस्लिम ब्रदरहुडका तीन सय नेता र कार्यकर्ताहरुलाई पक्राउ गर्न पुर्जी जारी गरिएको बताएको छ।
उनीहरुले जसलाई दोश्रो क्रान्ति भन्छन्, आज त्यसको दोश्रो दिन हो। त्यसैको खुसियाली मनाउन चार वटा इस्लामिक टेलिभिजन च्यानलहरुलाई बन्द गरिएको छ। दुईसय भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको छ। किन? के मोर्सी तानाशाह हुन्?
मुस्तफा, मोर्सी समर्थक एकजना कार्यकर्ता
ब्रदरहुड समर्थित टेलिभिजन स्टेशनहरु बन्द गरिएका छन् सेनाले सडकमा विरोध प्रदर्शनहरु हुन नदिने जनाएको छ।
तर मोर्सी समर्थकहरुले सेनाको कदम विरुद्ध आफ्नो विरोध जारी रहने बताएका छन्।
आफ्नो नाम मुस्तफा बताउने एकजना मोर्सी समर्थक कार्यकर्ताले भने, "उनीहरुले जसलाई दोश्रो क्रान्ति भन्छन्, आज त्यसको दोश्रो दिन हो। त्यसैको खुसियाली मनाउन चार वटा इस्लामिक टेलिभिजन च्यानलहरुलाई बन्द गरिएको छ। दुईसय भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको छ। किन। के मोर्सी तानाशाह हुन्?"
मोर्सीको फेसबुक पृष्ठमा प्रकाशित गरिएको एउटा सूचनामा सैनिक सत्तापलटको निन्दा गरिएको छ। त्यसमा इजिप्टका नागरिकहरुलाई संविधानको पालना गर्न र सत्तापलटको समर्थन नगर्न पनि आह्वान गरिएको छ। संवैधानिक वैधताको रक्षा गर्न आफ्नो जीवन समर्पण गर्ने वाचा गरेका मोर्सीले सेनामाथि एक पक्षलाई मात्र साथ दिएको आरोप पनि लगाएका छन्।
सन् दुई हजार एघारमा एउटा जनविद्रोहद्वारा तत्कालिन शासक होस्नी मुबारकलाई हटाइपछि जुन दुई हजार बाह्रमा भएको चुनावमा मोहम्मद मोर्सी राष्ट्रपति पदमा चुनिएका थिए।
तर उनको कार्यकाल लगातारको राजनीतिक अस्थिरता र धरमराउंदो अर्थतन्त्रका लागि संझिइनेछ।
इस्लामिक कानुनलाई बलियो तुल्याउने र सत्तामा मुस्लिम ब्रदरहुडको पकडलाई सुदृढ गर्ने राष्ट्रपतिको कदमले धर्मनिरपेक्ष तथा उदारवादी समुदायहरुलाई अलगथलग तुल्याईदिएको थियो।